Warshad Taxane 40G | Shiinaha Soosaarayaasha Taxanaha 40G, Alaab-qeybiyeyaal
40Gb / s QSFP + 1310nm 2km DDM Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
40Gb / s 2km QSFP + Transceiver waa module transceiver loogu talagalay 40GBASE-LR4, InfiniBand QDR iyo DDR isku xirnaanta iyo codsiyada isku xirnaanta 40G. Naqshadayntu waxay waafaqsan tahay 40GBASE-LR4 oo ah heerka IEEE P802.3ba iyo QSFP Multi-Source Agreement (MSA) iyo QDR / DDR Infiniband
40Gb / s QSFP + SR 850nm 100m DDM MTP / MPO qalabka wax lagu wareejiyo
Muuqaalada 'QSFP + transceiver modules' waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo 40 Gigabit halkii xiriirinba halkii ilbiriqsi marka la barbar dhigo fiber multimode isku mid ah, oo ay ku jiraan jebinta illaa afar 10 Gigabit halkii xiriirin labaad. Waxay u hoggaansamayaan QSFP + MSA iyo IEEE 802.3ba, 40GBASE-SR4 iyo IEEE 802.3ba 10GBASE-SR. Hawlaha baaritaanka dhijitaalka ah waxaa lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo I2C interface, sida lagu qeexay QSFP + MSA.
40Gb / s QSFP + LR 1310nm 10km DDM Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
40Gb / s 10km QSFP + Transceiver waa module waxbadelo loogu talagalay 10Km codsiyada isgaarsiinta indhaha. Naqshadayntu waxay waafaqsan tahay 40GBASE-LR4 oo ah heerka IEEE P802.3ba iyo QSFP Multi-Source Agreement (MSA).